“(၁၆)နှစ်ပြည့် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အတွက် စိန်(၁၆)လုံးပါ စိန်ပန်းစည်းလက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့ ဟန်နီချို” – Cele Gabar
“(၁၆)နှစ်ပြည့် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အတွက် စိန်(၁၆)လုံးပါ စိန်ပန်းစည်းလက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့ ဟန်နီချို”
ဟန်နီချိုကတော့ မကြာသေးမီက တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Mrs Universe ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အိမ်ထောင်ရှင်အလှမယ်ပွဲကြီးမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်စားပြုအလှမယ်အနေနဲ့ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး Mrs Universe (2019) Winner ဆုကြီးကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကြီးမှာတော့ နိုင်ငံပေါင်း (၉၀)ကျော်က နိုင်ငံကိုယ်စားပြုအလှမယ်တွေပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဟန်နီချိုကတော့ Mrs Universe (2019) Winner ဆုကြီးအပြင် နောက်ထပ် Mrs Talent Winner, Mrs Personality Winner,Four Beauty Season Sponsored awards Winner ဆုကြီး (၄)ဆုကိုပါတစ်ပါတည်းယူဆောင်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ ဟန်နီချိုရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကလည်း အခုလိုဆုကြီးတွေရရှိလာအောင် Support လုပ်ပေးတဲ့ သူတွေထဲမှာ အဓိကအနေနဲ့ပါဝင်တဲ့ သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလောမှာလည်း ဟန်နီချိုဟာ သူရဲ့ခင်ပွန်းဆီက မင်္ဂလာသက်တမ်း (၁၆)နှစ်ပြည့်အတွက် စိန်(၁၆)လုံးပါတဲ့ စိန်ပန်းစည်းကို လက်ဆောင်အနေနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို “အိမ်ထောင်သက် (၁၆) နှစ်မို့ (၁၆) ပွင့်ပါ စိန်ပန်းစည်း”ဆိုပြီး သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နာကနေဖော်ပြထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ ဟန်နီချိုကတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို အချစ်မလျော့ဘဲ ပိုပိုတိုးပြီးချစ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့နော်….
Source – Honey Cho
“(၁၆)ႏွစ္ျပည့္ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္အတြက္ စိန္(၁၆)လံုးပါ စိန္ပန္းစည္းလက္ေဆာင္ရခဲ့တဲ့ ဟန္နီခ်ိဳ”
ဟန္နီခ်ိဳကေတာ့ မၾကာေသးမီက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Mrs Universe ကမ႓ာ႕အႀကီးဆံုး အိမ္ေထာင္ရွင္အလွမယ္ပြဲႀကီးမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ကိုယ္စားျပဳအလွမယ္အေနနဲ႕ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး Mrs Universe (2019) Winner ဆုႀကီးကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ရရွိပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါတယ္။ဒီပြဲႀကီးမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေပါင္း (၉၀)ေက်ာ္က ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအလွမယ္ေတြပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဟန္နီခ်ိဳကေတာ့ Mrs Universe (2019) Winner ဆုႀကီးအျပင္ ေနာက္ထပ္ Mrs Talent Winner, Mrs Personality Winner,Four Beauty Season Sponsored awards Winner ဆုႀကီး (၄)ဆုကိုပါတစ္ပါတည္းယူေဆာင္လာခဲ့ပါေသးတယ္။ ဟန္နီခ်ိဳရဲ႕ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကလည္း အခုလိုဆုႀကီးေတြရရွိလာေအာင္ Support လုပ္ေပးတဲ့ သူေတြထဲမွာ အဓိကအေနနဲ႕ပါဝင္တဲ့ သူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
လတ္တေလာမွာလည္း ဟန္နီခ်ိဳဟာ သူရဲ႕ခင္ပြန္းဆီက မဂၤလာသက္တမ္း (၁၆)ႏွစ္ျပည့္အတြက္ စိန္(၁၆)လံုးပါတဲ့ စိန္ပန္းစည္းကို လက္ေဆာင္အေနနဲ႕ရရွိခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကို “အိမ္ေထာင္သက္ (၁၆) ႏွစ္မို႔ (၁၆) ပြင့္ပါ စိန္ပန္းစည္း”ဆိုၿပီး သူ႕ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္နာကေနေဖာ္ျပထားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေရ ဟန္နီခ်ိဳကေတာ့ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို အခ်စ္မေလ်ာ့ဘဲ ပိုပိုတိုးၿပီးခ်စ္ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္တဲ့ေနာ္….
“မွေးနေ့မှာ ပရိသတ်တွေကို ကုသိုလ်အတူတူပြုလုပ်ခွင့်ရအောင် ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ G-Fatt”
“ကံမကုန္လို႔ျပန္ဆုံရင္ ရည္းစားေဟာင္းကို အနမ္းေပးခ်င္ပါတယ္လို႔ ရင္ဖြင့္လာတဲ့ စူးရွထက္”
“ကုန်းတစ်တန် ရေတစ်တန်နဲ့ သွားရတဲ့ ဒေသတွေအထိအလှူသွားရောက် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စည်ဖြိုး”
“အခမ်းနားဆုံးမေတ္တာ”ဇာတ်ကားထဲမှာ ပိုးစိုးနဲ့ပက်စက်တွေရိုမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောပြလိုက်တဲ့နေခြည်ဦး